MZ will change Unicode after Myanmar new year — MYSTERY ZILLION
MZ will change Unicode after Myanmar new year
April 2011 edited April 2011 in MZ News
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးနေ့မှာ MZ ကို unicode အဖြစ်ပြောင်းပါမယ်။ ထို့ကြောင့် အောက်ပါ ပြဿနာ များ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ name ဖြင့် login ဝင်မရခြင်း။
ဇော်ဂျီနာမည်ပေးထားတဲ့ username များဟာ unicode နဲ့ ပြင်သွားမှာဖြစ်လို့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်နဲ့ ရိုက်ပြီး Login ဝင်လို့မရတော့ပါ။ ဒါကြောင့် English username သည် အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ပါသည်။ Username ပြောင်းလိုသူများ ကျွန်တော့်ကို PM ပို့နိုင်ပါတယ်။
Android ဖြင့် ဖတ်မရခြင်း
Android မှာ ဖတ်လို့ရအောင် ကျွန်တော် vanilla plugin ထပ်မံရေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မေ ၊ ဇွန် လလောက်မှသာ Android browser ဖြင့် ဖတ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
Unicode ဖြင့် Post တင်ခြင်းသာ လက်ခံခြင်း
Post များကို Unicode သို့မဟုတ် English ဖြင့် တင်သည်များကိုသာ လက်ခံပါတော့မည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိ ဇော်ဂျီ အသုံးပြုသူများ အနေနဲ့ unicode ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်များကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
၁၆ ရက် တွင် Unicode ပြောင်းမည်
၁၅ ရက်နေ့ညတွင် ပိတ်ပြီးတော့ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ပြောင်းပြီးတော့ vanilla forum ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုသွားပါမည်။
Vanilla ကို ပြောင်းမည်
လက်ရှိ အသုံးပြုထားသော Vbulletin forum မှ Vanilla ကို ပြောင်းလဲမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် post တင်ပုံ တင်နည်းတွေ ကွာသွားနိုင်သလို အသုံးပြုပုံစံများလည်း ကွာသွားပါမည်။ သို့ပေမယ့် ပိုမို ပေါ့ပါးမြန်ဆန်ပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ ဖတ်ရှုလို့ ရလာနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ထို့အပြင် Google Account , Facebook Account များဖြင့် Signup လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လို့ရပါမည်။
Private Message May Lost
Vanilla ပြောင်းမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လက်ရှိ private message များ ပျက်စီး ပျောက်ရှ တာတွေ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရေးကြီးတဲ့ private message များကို backup လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်။
Thanked by 1 ofalolati
unicode အသုံးပြုပုံ ကို ဘယ်မှာလေ့လာလို့ ၇လဲဗျ။ wesite တစ်ခုခုပေါ့။
April 2011 edited April 2011 Moderators
mmitd ဆိုတဲ့ forum မှာရေးထားတာရှိပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်း သွင်းလို ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာ မှာ Unicode သွင်းပြိးပြီ... Unicode နဲ ့တော့ မရိုက်တတ်သေးဘူး... Converter ပဲသုံးတယ်...
unicode နဲ ့မှ အဆင်ပြေမှာလားဗျာ။ ကျွန်တော်တော့ တုံးတယ်ပဲပြောပြောဗျာ။ unicode မသုံးချင်ဘူး။ တိုင်ပတ်တယ်။ သုံးရတာ အဆင်မပြေဘူး။ ဇော်ဂျီက ရင်းနှီးပီးသား ဖြစ်နေတာ ကြာလို ့လားတော့ မသိဘူး
keymagic ထဲက ဇော်ဂျီ ယူနီ ကို သုံးလိုက်ရင် လက်ကွက်က အရင်ကျနော်တို့ သုံးနေတဲ့ ဇော်ဂျီ လက်ကွက်အတိုင်းဘဲဆို...
ဒါပေမဲ့ ကျနော် ဇော်ဂျီ ယူနီ ကို ရွေးလိုက်ပြီး သုံးလိုက်တော့ လက်ကွက်က မတူတော့ဘူးဗျ...
အင်းဗျာ.. ကျွန်တော်လဲ ဘယ်လိုပြောမလဲ...သုံးရတာ အဆင်မပြေဘူးဗျာ..... ကျွန်တော် အမြဲ ၀င်နေကျ MMITD လဲ Unicode စ စပြောင်းချင်းတုန်းက ကျွန်တော် တော်တေ်လေးကို စိတ်ပျက်သွားတယ်..... အခုထိလဲ Unicode နဲ ့မရေးတတ်သေးပါဘူးဗျာ... converter ကြီးတွေသုံးပြီး post တွေရေးရတာ အလုပ်ရှုပ်လွန်းလို ့ဗျာ..
ကျနော်အခုဖြစ်နေတာက အဲဒီလင့်လုပ်တဲ့အတိုင်းဘဲလုပ်တာဘဲ... ဇော်ဂျီ ယူနီ ပြောင်းလိုက်တော့ လက်ကွက်က ဘာလို့မတူတော့တာလဲ...
ကီးမက်ဂျစ်ကို သုံးတဲ့နေရာမှာ Installer ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်  ဇော်ဂျီယူနီကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ ယူနီကုဒ်ကို ဇော်ဂျီလက်ကွက်အတိုင်း  ရိုက်လို့ရနေပါမယ်.။
အက္ခရာကီးဘုတ်ကို သုံးကြည့်ပါ။ လက်ကွက်ဇော်ဂျီနဲ့ ကွဲတယ်ဆိုတာက တချောင်းငင်၊ အောက်ကမြစ် နေရာတွေမှာ တခုတည်သုံးစရာပဲလိုလို့ လက်ကွက်နေရာပိုလာတာတွေမှာ တချို့အက္ခရာတွေထည့်ပေးထားတာပဲကွာပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် အဲဒီ အက္ခရာတွေက အသုံးနည်းပါတယ်။ နောက်တခုကွာတာက အက္ခရာ ကီးဘုတ်ရဲ့ ပဉ်ဆင့်မှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ရိုက်ပုံရိုက်နည်းရှေ့နောက်ကွဲလွဲတာလေးပဲရှိပါတယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့ရိုက်နေကျသူဆိုသိပါတယ်၊ အက္ခရာကီဘုတ်မှာ (ဗျည်း + ~ ) ဆိုရင် ပဉ်ဆင့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
နောက်တခုကအများဖြစ်လေ့ရှိတာက ( န ) ကိုလိုက်ရှာနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါက ဇော်ဂျီမှာသာလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး ယူနီကုဒ်မှာ ( န ) တခုပဲရှိပါတယ်။ ( န + --ု = နု ) ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ တချောင်းငင်မှာလဲ ( k ) ကီးကို နှိပ်ရုံနဲ့ ပြီးပါတယ်၊ အဲဒီတခုပဲရှိပါတယ်။ (ု) ဆိုတဲ့ တခြောင်းငင် အရှည်မရှိပါဘူး သူပေါ်ရာမယ့်နေရာမှာ ( k ) ကီးကို နှိပ်ရုံနဲ့ ပေါ်လာပေးပါလိမ့်မယ်။ တခြားအက္ခရာတွေလဲ ဒီလိုပါပဲ လက်ကွက်မှာ စာလုံးတခုစီပဲရှိပါတယ် နှစ်မျိုးသုံးမျိုးမရှိပါဘူး။ အဓိကကွာခြားတာကတော့ သင်ပုန်းကြီးအတိုင်း စာလုံးပေါင်းရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေးထုံးနဲ့ သွေဖယ်ပြီးရိုက်လို့ရမည််မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်တာတွေကတော့ ရိုက်ရင်းသိသွားပါလိမ့်မယ်။
32bit version: http://www.thanlwinsoft.org/ThanLwinSoft/Downloads/Keyboards/Ekaya-0.1.9_x86.exe
64bit version: http://www.thanlwinsoft.org/ThanLwinSoft/Downloads/Keyboards/Ekaya-0.1.9_x86_64.exe
အခု zawgyi နဲ့က အဆင်မပြေဘူးလား.....
ဟုတ်ပါတယ် zawgyi နဲ့အဆင်မပြေဘူးလား....ကျွန်တော်တို့ကတော့ undcode ကိုလုံး၀လုံး၀(မသုံးတတ်ပါ)...သေချာတာတော့အသုံးပြုတဲ့လူတွေ...80% လောက်တော့ဒုက္ခရောက်မှာပါပဲ.....
ထွင်လဲထွင်နိုင်တဲ့လူတွေ.....Unicode ပြီးရင် V.....:mad:nicode ထပ်ထွက်မယ်ကြားတယ်....(နားလည်လို့တော့မဟုတ်ပါ...တင်ပြချင်းသာဖြစ်ပါသည်..)
ppower wrote: »
crazyG wrote: »
ဘာကြောင့်ဆိုတာတွေကို အောက်မှာပြထားတဲ့ Post မှာဖတ်ကြည့်ပါ။
Unicode ကိုသုံးရတာ ခက်ခဲနေရင်၊ အဲဒါကို ဖိုရမ်မှာ မေးပြီး သုံးတတ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ ယူနီကုဒ်သုံးရခက်တယ်ဆိုတော့ ဇော်ဂျီစသုံးခါစကရောလွယ်ခဲ့လို့လား။ Unicode ကိုပြောင်းသုံးလိုက်တာဟာ မြန်မာစာသုံးကွန်ပြူတာစံနစ်ကို ကောင်းကောင်းအထောက်အပံ့ပေးမှာမို့ Website တွေ Forum တွေ ဒုက္ခခံပြီးပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
unicode သည် မြန်မာစာသုံးကွန်ပျုတာစံနစ်ကို ကောင်းကောင်းအထောက်အပံ့တကယ်ပေးနိုင်မှာလား
architectboy wrote: »
အပေါ်မှာပြထားတဲ့ Thread ကိုဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ကို အပြည့်အဝမလိုက်တာတဲ့ စနစ်တစ်ခုတောင် အကျိုးပြုနိုင်ရင် အပြည့်အဝလိုက်နာတဲ့ စနစ်တစ်ခုဟာ အကျိုးမပြုနိုင်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါ ဒီလိုမှမပြောင်းရင် ဘယ်တော့မှ ပိုရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရနိုင်တော့မယ်မဟုတ်ပါ အမှားများလာလာလေ ပြင်ရခက်လေလေပဲ။
ကိုရောင်စိန်တို့လဲသူများ ယောင်တိုင်း လိုက်ရောင်ပြီနဲ့တူတယ်...:biggrin:သေချာတာတော့ Service သမားတွေ ဂွင်တွေ့အုုံးမယ်.ဗျို့....
rapperlay444 wrote: »
တစ်ချို့Unicode တွေမှာ .. ဥပမာ WinUni Innwa ဆိုရင် Keymap ဆိုတဲ့ ဟာပါပါတယ်။ F9 နှိပ်ပြီး Myanmar to English, English to Myanmar, <Zawgyi လို Ctrl+Shif> ရပါတယ်။ လက်ကွက်ကလည်း Zawgyi နဲ့တူတူပါပဲ။ စမ်းကြည့်ပါ။
ဂွင်ဖြစ်မယ်ထင်ရင် ခင်ဗျား ဆားဗစ်သမားလုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ...... ခက်တာလိုက်လို့...... :cool:
အော် ယူနီကုတ်က ဒီလောက်လဲ မခက်ပါဘူး။ လူတွေရဲ့ သဘောသဘာ၀အတိုင်း (သူ့ဟာနဲ့သူအဆင်ပြေနေရဲ့သားနဲ့လို့လည်း တွေးတာပေါ့။) အပြောင်းအလဲကိုလက်မခံချင်တာပါ။ သူ့ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ဒီလောက်ဖတ်ရပြီပဲ။ ပြောင်းသင့်ရင် ပြောင်းရတော့မှာပေါ့။ ဒီခေတ်မှာ ဒီလောက် အပြောင်းအလဲတွေများတာ ကျွန်တော်တို့ က အပြောင်းအလဲကို လက်မခံချင်လို့မရတော့ဘူး။ နည်းပညာတွေဆိုတာ ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန်တောင် မတူတော့တာ။ ကျွန်တော်ကတော့ myanmaritpro ကို အမြဲ၀င်တတ်တော့ အဲဒီဆိုက်က ယူနီကုတ်ပြောင်းတာနဲ့ ကိုယ်လည်း ပြောင်းပြီး ကျင့်လိုက်တာ။ နှစ်ရက်မကြာပါဘူးဗျာ။ လွယ်မှလွယ်။ ရိုက်တတ်သွားတော့ ယူနီကို ဇော်ဂျီထက်ပိုကြိုက်ပါတယ်။ အားသာချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ အခု အစိုးရ၊ဌာနတွေလည်း ယူနီကုတ်ကို သုံးနေပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ စံတစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်သွားအောင် အခုတည်းက အားလုံးက ၀ိုင်း၀န်းပြီး သုံးကြရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အကျိုးရှိမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်လေး နည်းနည်းပေးပြီး ရိုက်ကျင့်လုပ်ကြည့်ပါ။ ထင်သလောက်မခက်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလိုပဲတွေးမယ်ဆိုတာသိပြီးသားပါဗျာ.ထားပါတော့..ဘာမတော့မဟုတ်ပါဘူး...ဒါမေမည့် (ဗမာပြည် မှ အိုင်တီ လောကသားများ စည်းစည်းလုံးလုံးညီညီ ညွတ်ညွတ် နဲ့ ဗမာပြည် အိုင်တီ လောကကြီး အမြန်ဆုံး တိုးတက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်)
minchit wrote: »
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ ခက်တာ မခက် တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး...အပြောင်းအလဲဆိုတာကိုလဲ လက်မခံချင်လို့ မဟုတ်ပါ(လက်မခံလို့လဲမရပါ) ၊ပြောင်းလဲသင့်တာကိုတော့ပြောင်းလဲရမှာပါပဲ၊ ဒါမေမည့် အပြောင်းအလဲကောင်း ဖြစ်ဘို့ တော့ လိုတယ်ပေါ့ဗျာ.မဟုတ်ဘူလား။
ဘာကြောင့်မပြောင်းလဲချင်တာလဲဆိုတာ ရေရေရာရာပြောပြပေးပါ။ ယခုလက်ရှိိတော့ unicode ပြောင်းဖို ့ဆိုတာ ငှက်ပျောသီးခွာစားတာနဲ ့နင်လားငါလား နီးပါး လွယ်ကူနေပါပြီ။ zawgyi keyboard အတိုင်းသုံးချင်ရင််တော့ NHM နဲ ့သုံးလို ့ရပါတယ်။ Keyboard များတယ်ဆိုတာ လူအများစုကြိုက်အောင်လုပ်ထားတာပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တာနဲ ့ကိုယ်သုံးလို ့ရပါတယ်။ လေးမျိုးရိုက်လေးမျိုးသိမ်းတာ ကိုသုံးမလား Unique ဖြစ်တာကိုသုံးမလား ကိုစဉ်းစားပါ။ နောက် Unicode font တော်တော်များများဟာ Free and OpenSource ပါ။ Gtalk မှာ useless chat တွေဆိုရင်တော့ ဘာ font သုံးသုံးအဆင်ပြေပေမယ့် တကယ်တမ်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ content တွေ ပြန်ရှာချင်ရင် အထက်ကပြောသလို လေးမျိုးရိုက် လေးမျိုးသိမ်းဖြစ်ရင် အဆင်မပြေပါဘူး။
maharbandola1 wrote: »
Fonts should be standard, bro.
ကျွန်တော်.မှာ Myanmar3 font တော.ရှိနေပါပြီ၊ Keyboard မရှိလို. Zawgyi နဲ.အနီးစပ်ဆုံးတူတဲ. Keyboard လေးများရှိရင်မစကြပါဦး။
aungkyawzeya wrote: »
Now ... MZ database have over 500 MB and it's not small database. 500 MB is not easy to convert unicode and take 1 or2hour for converting.
So, let change now. If we change after 1 GB or2GB, it will late. I believe, Unicode will be major in the future and we should change now. I am collecting all the font and keyboard. I will release before friday on blog.mysteryzillion.org.
Let change together ......
April 2011 Administrators
now this thread is close and please discuss in<div><br></div><div>http://www.mysteryzillion.org/discussion/10098/now-we-are-using-unicode</div>;
ဒီဆွေးနွေးချက် ကို ပိတ်ထား ပြီးပါပြီ။